I-Villa Paradiso - I-Airbnb
I-Grand 1850 Goldrush Building enezandiso ezakhelwe ukuhambisana nesikhathi 4 Amakamelo okulala Amakhulu abanzi ephasijini i-jarrah floors aiconditioned, Ikhishi lomklami. 2 amagumbi okugeza
Ayikho i-Wifi endaweni
Ingalala abantu abangu-10 ngokunethezeka
Indlu yomlando ebuyiselwe kahle futhi yanwetshwa eyakhiwa ngo-1853 Isakhiwo saseGoldrush sisesimweni esihle njengoba sibuyiselwe ngokuphelele ngesitayela senkathi enezindawo zomlilo. Uzothola amaphansi aphucuziwe kuyo yonke indlu Indlu inomsebenzi wokupenda omuhle nempahla yasendlini
Ikhishi elihlome ngokuphelele elifaka amapulangwe amahle Ukushisisa igesi kanye nendathane yezinto ezikhangayo zomhlaba futhi kune-airconditioning ekamelweni ngalinye nasendaweni yokuhlala.
Kushiswe ngokuphelele ngegesi yokufudumeza emakamelweni okulala nasezindlini zokugezela. kanye nesiqandisi se-airconditioning emakamelweni okulala nasendaweni yokuphumula konke kuthuthelwa kuzo zonke izindawo
Ifakwe kahle ukuze ihambisane nenkathi
Ingxenye yomlando wakuqala Yakhelwe i-confectioner yaseJalimane ngo-1853
Itholakala ngocingo kuphela